मिडिया, अनलाईनहरु अदालत अनी प्रहरी प्रशासन भन्दा माथि ? | Samajik Khabar
Home धारणा/तर्क मिडिया, अनलाईनहरु अदालत अनी प्रहरी प्रशासन भन्दा माथि ?
मिडिया, अनलाईनहरु अदालत अनी प्रहरी प्रशासन भन्दा माथि ?
नेपाल सरकारले मिडिया विधेयक माथि छलफल गर्दै गर्दा यता मिडिया तर्फ भने चरम लापरवाह भैरहेको छ । हरेक घटनाको छानबिन अनि भ्रमात्मक समाचारहरु मिडियामा छ्याप छ्याप्ति भैसकेका हुन्छन् । दुनियाँ चकित पार्ने अनि नयाँ-नयाँ खुलासाहरु पनि आजकल यी नै अनलाईनहरु मार्फत हुँदै आएका छन् । तर तिनीहरुको सत्यता हेर्ने हो भने सुन्य प्रय छन् । बिभिन्न अनलाईनमा प्रकाशित समाचार विश्वास गर्ने आधार नै हुँदैनन् तर सरकार यसको नियन्त्रणमा भन्दा पुरै पत्रकारिता माथि नै अंकुस लगाउन चहान्छ ।
हालसालै पत्रकार शालिकराम पुडासैनिको संकास्पद निधन अहिले पनि प्रहरीको छानविनकै प्रकृयामा रहेको छ। प्रहरीले अझै यो हत्या या आत्महत्या पुस्टि गरि नसकेको अवस्था छ । तर अनलाईन मिडियाहरुले भने यो हत्यानै हो भनेर अझ भनौँ हत्यारा नै पत्ता लगाईदिई सके । यो अनलाईन ले के आफुलाई प्रहरी प्रशासन अनि अदालत भन्दा पनि माथि आफुलाई सोच्छन् ?
करिब एक बर्ष पहिले भएको निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्याको विषयमा प्रहरीले छानविन गरिरहेको छ । एकदिन हत्यारालाई प्रहरीले पनि सार्वजनिक गर्ला तर ति युट्युव च्यानल अनि अनलाईन मिडियाले भने हरेक दिन नयाँ-नयाँ खुलासा गर्दै आएका छन् । के प्रहरीले उक्त जानकारी नपाएको हो ? कि प्रहरीले तिनमाथि छानविन गरिसक्यो ? यदि सार्वजनिक गर्न लायक थियो भने पक्कै गर्थ्यो होला ।
मेरो यो भनाईको अर्थ यो होईन कि कतै भैरहेको अनियमितता अनि भ्रष्टाचारको विरुद्ध आवाज नउठाउने, हो त्यस्तो विषयमा डटेर लाग्नु पर्दछ तर केहि भ्युज अनि लाईकको चक्करमा जनतालाई नै भ्रमित बनाउनु पनि अर्को अपराधनै हो । सुचनाको हक सबैलाई छ । तर त्यसको लागि भरपर्दो माध्यमको भने अभाब छ । कुनैपनि मिडियामा आएका समाचारको विश्वास गर्ने आधार पाइदैन ।
तर कारवाही भने सुन्य प्रय छ । यिनै अनलाईन को कारण स्वतन्त्र अनि निस्पक्ष पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरुलाई पनि अबिश्वासको नजरले हेर्ने गरिन्छ । यो गलत हो । प्रेस स्वतन्त्रता हुनु पर्छ म पनि यसको पक्षमा हो तर स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्दैमा जे मनमा आयो त्यो लेख्न पनि त अनुचित होला नि ?
सबैले आफ्नोकाम गर्नै पर्दछ यदि गरेनन् भने अब मिडियाले किन गरेनन् भनेर सम्बन्धित निकायको समाचारको मध्यमबाट ध्यानाकर्षण गराउने हो । भैरहेको बेथितीलाई जनता सामु ल्याउने हो । सभ्य भाषा, सभ्य सैलिमा प्रस्तुत हुनु पत्रकारको दायित्व हो । समाचार लेख्दा सत्य निस्पक्ष हुनुका साथै कोहि कसैको व्यक्तित्वमा खलल नपुग्नेगरि समाचार लेख्नु पर्नेहुन्छ भनेर पत्रकारिता गरिन्छ तर अहिले कतिपय युट्युब, अनलाइनहरुले यो कुरामा ध्यान पुर्याएको देखिँदैन ।
Previous articleनेपालले विश्वकप छनोट अभ्यास खेल खेल्ने – singhadurbar daily
Next articleभारतको केरलामा बाढी – singhadurbar daily